Vaovao - Ny indostrian'ny bisikileta dia mahomby amin'ny famokarana sy amin'ny fivarotana
Mikaroka vaovao farany momba ny bisikiletaindostria, misy lohahevitra roa tsy azo ialana: ny iray dia ny varotra mafana. Araka ny angon-drakitra avy amin'ny Fikambanan'ny Bisikileta China, hatramin'ny telovolana voalohany tamin'ity taona ity, ny indostria dia nanampy sanda ho an'ny bisikileta taniko (ao anatin'izany nybisikileta elektrika) ny indostrian'ny famokarana dia nitombo mihoatra ny 30%. Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Martsa, ny habaky ny bisikileta mihoatra ny habe voatondro dia 10,7 tapitrisa, fitomboana 70,2% isan-taona; Ny vokatry ny bisikileta mihoatra ny habe voatondro dia 7.081 tapitrisa, fitomboana 86,3% isan-taona.
Ny iray hafa dia ny fampiakarana ny vidiny. Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity, marika vitsivitsy an'ny bisikileta elektrika miaraka amin'ny herin'ny fifampiraharahana matanjaka dia nampisondrotra ny vidin'ny fivarotana eo anelanelan'ny 5% sy 10%.
Ny varotra mafana sy ny fiakaran'ny vidiny dia hita taratra amin'ny famokarana sy fivarotana ny indostrian'ny bisikileta hatramin'ny taona lasa, fa afaka hitohy amin'ny manaraka ve izany?
Zhonglu Co., Ltd. dia malaza mpanamboatra bisikiletaany Sina. Ny bisikileta marika "Mandrakizay" novokarin'ny sampana, miaraka amin'i Shanghai Phoenix sy Tianjin Feige, dia raisina ho toy ny marika nasionaly. Ny tatitra isan-taona nataon'ny orinasa 2020 dia mampiseho fa tamin'ny taon-dasa dia nahatratra ny fidiram-bola 734 tapitrisa yuan ny orinasa, fiakarana 25,60% isan-taona, avo indrindra tao anatin'ny folo taona.
Avy aiza ny fitomboan'ny vola miditra? Raha ny fahitana ny firafitry ny orinasa dia ny orinasan-bisikileta no tena loharanom-bolan'ny Zhonglu miasa, mitentina 78,8% ny vola miditra. Mikasika ny habetsaky ny varotra, ny varotra bisikiletaary ny strollers dia nitombo 80,77% isan-taona. Raha ny tsena isan-karazany dia nitombo 29,42% isan-taona ny vola miditra amin'ny tsena anatiny. Ny fitomboana lehibe amin'ny varotra dia nahatonga ny fitomboan'ny vola miditra haingana ary nahatsapa fiovana avy amin'ny fatiantoka ka nahazoana tombony.
Xinlong Health dia mpanamboatra ampahany amin'ny bisikileta, ary ny angon-drakitra misy azy dia maneho ny varotra bisikileta tamin'ny taon-dasa tamin'ny fomba fijery hafa. Amin'ny taona 2020, ny orinasakojakoja bisikiletany baiko dia nitombo be isan-taona. Ny fampitomboana ny varotra kojakoja fanampiny dia nahatonga ny fivoaran'ny fahasalamana Xinlong.
Ny tahirin-kevitra momba ny fanondranana indostrialy taona 2020 navoakan'ny Fikambanan'ny Bisikilety China andro vitsy lasa izay dia nanamafy izany ihany koa. Mampiseho ny statistika fa ny fireneko dia nanondrana bisikileta 60.297 tapitrisa tamin'ny taon-dasa, fitomboana 14,8% isan-taona. Taorian'ny fampiatoan'ny Etazonia ny vidin'ny bisikileta sasany dia nihena indray ny fanondranana fiara, miaraka amin'ireo fiara 16,216 tapitrisa aondrana any Etazonia mandritra ny taona, fiakarana 34,4% isan-taona.
Momba ny antony mahatonga ny lazan'ny bisikileta,Mino ny manam-pahaizana momba ny indostria fa noho ny filàna fisorohana ny valanaretina dia nitombo be ny fangatahan'ny olona ny dia lavitra, ary ny bisikileta, anisan'izany ny bisikileta elektrika, no isalasalana fa safidy tsara indrindra. Ankoatr'izay, firenena eoropeanina sy amerikana maro no nanolotra fanampiana ho an'ny mividy, nampitombo ny fanamboarana làlan-bisikileta ary ny fepetra fandrisihana hafa, izay vao mainka nandrisika ny fihinanana bisikileta.
Mety haharitra ve ny varotra mafana? Ny olona tompon'andraikitra misahana ny fikambanan'ny fahaleovan-tena any Chine dia maminavina fa ny vokatra azo amin'ny bisikileta dia hahatratra 80 tapitrisa amin'ny 2021, ary ny vokatra azo amin'ny bisikileta dia manodidina ny 45 tapitrisa. Antenaina fa ny fanondranana bisikileta sy bisikileta elektrika dia hahatratra fitomboana indroa koa.
Hatramin'ny fiandohan'ny taona dia nisy ny tatitra nataon'ny haino aman-jery fa na dia amidiny tsara aza ny marika elektrika sasany dia namoaka fampandrenesana ho an'ireo mpivarotra ny fiakaran'ny vidim-piainana. Vao tsy ela akory izay ny mpanao gazety iray avy amin'ny Economic Daily no nitsidika fivarotana bisikileta elektrika maro ary nahita fa tsy mitovy ny raharaha. Ny marika sasany dia tsy nampiakatra ny vidiny, ny sasany milaza fa nampiakatra ny vidiny, ary ny sasany kosa nilaza fa na dia nitombo aza ny vidiny dia azo ahena kokoa izany amin'ny endrika fihenam-bidy.
Raha ny fahitan'ny mpamokatra azy dia i Emma fiara elektrikadia efa namoaka fampandrenesana fanitsiana ny vidin'ny mpivarotra, ary ny salanisan'ny fiakaran'ny fiara tokana dia 80 yuan ka hatramin'ny 200 yuan. Raha ny filazan'ireo masoivohon'ny fiara mpitondra herinaratra Yadea, hatramin'ny fiandohan'ny taona dia tafakatra 100 yuan ny vidin'ny varotra fiaran'ny Yadea. Ho fanampin'izany, orinasan-tsolika bisikileta marobe no namoaka fanamarihana ny fiakaran'ny vidiny.
Nilaza ny manam-pahaizana momba ny indostria fa ny fiakaran'ny vidiny dia misy ifandraisany amin'ny fiakaran'ny vidin'ny akora. Hatramin'ny volana aprily lasa teo, satria nitombo ny vidin'ny entam-barotra iraisampirenena, ny vidin'ny akora toy ny vy, aliminioma, varahina, plastika, kodiarana ary bateria mifandraika amin'ny famokarana indostrialy dia tafakatra avo indrindra. Ny fiovana eo amin'ny vidiny ambony dia ampitaina amin'ireo faritra afovoany sy ireo fiara any ambany.
Ankoatr'izay, ny fenitra nasionaly vaovao, izay natomboka tamin'ny volana aprily 2019, dia mitaky fiara elektrika misy kodiarana roa hanamarinana 3C. Ny sasany mino fa raha mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fenitra nasionaly vaovao dia hanatsara kokoa ny fitaovany sy ny fizotrany ny mpamokatra bisikileta elektrika ary hiakatra mifanaraka amin'izany ny sandany. Ho fanampin'izay, ny fitomboan'ny fangatahana bisikileta mandritra ny valan'aretina dia hampiakatra ny vidin-tsolika.
Nilaza ny tompon'andraikitra tompon'andraikitra amin'ny Fikambanana Auto Auto China fa ny fiakaran'ny vidiny dia mbola tsy lasa tranga mahazatra eo amin'ny sehatry ny indostria. Amin'izao fotoana izao dia misy karazana orinasa roa lehibe izay nampiakatra ny vidiny. Ny karazany iray dia orinasa miditra amin'ny indostria manana ny maha-izy azy amin'ny Internet, ary tsy lehibe ny haben'ny varotra ao aminy, ary ny tombom-barotra no zava-dehibe kokoa; ilay karazany hafa dia orinasa mitarika manana feon-tsena matanjaka ary sahy mampiakatra ny vidin'ny vokatra. Alefaso ny tsindry amin'ny fiakaran'ny vidin'ny akora.